Play My Chemical Romance Treasure!
Dị ka aha na-egosi, Paireti Treasure dabeere na isiokwu nke na My Chemical Romance ịchọ akụ zoro ezo. A 5 ukwu, 9 payline game, Paireti Treasure awade multiple nzọ nhọrọ, ọchị site na 10p ka £ 1 kwa akara. The egwuregwu na-agụnye egbuke egbuke, crisp ndịna-emeputa na-akpali akpali paireti akara dị ka a paireti, a gold mkpụrụ ego, ka oporo, a paireti ụgbọ mmiri na elu uru ebre kaadị. Ọ na-agụnye ọhịa akara, ikposa na akara na a bonus game, enye gị ọtụtụ ohere iji merie oké ego prizes.
-Akpọ Game of Pirates Treasure
Ị nwere ike na-egwu maka fun n'ihi na a obere ìhè-hearted ụtọ ma ọ bụ ị nwere ike igwu maka ezigbo ego na-agbalị aka gị na-emeri ụfọdụ akụ. Ọ bụrụ na ị na-egwu maka ezigbo ego, na-amalite na egwuregwu, ị ga-ahọrọ hà nzọ gị na ọnụ ọgụgụ nke e na ị chọrọ nzọ na na mgbe ahụ na-amalite na-esi anwụde spinning. Nzọ opekempe kwa atụ ogho bụ 10p, mgbe kacha nzọ, ọ bụrụ na ị nzọ na niile 9 edoghi, bụ £ 9.
The gold mkpụrụ ego bụ anụ na akara na egwuregwu na ọ nọ n'ọnọdụ ndị ọzọ nile na akara, ma e wezụga ikposa akara iji wuchaa a na-emeri Nchikota.
The oporo bụ ikposa akara ma ọ awards a payout mgbe akara iyi ka a chụsasịrị ndị na-esi anwụde.
E nwekwara otu akpali akpali atụmatụ osisi na akụ chests jupụtara ọlaedo akụ na-enye gị ohere iji gị mụbaa winnings ma na-home nnukwu payouts.
The egwuregwu dị mfe ịmụta na-egwu na-enye gị ohere iji merie nnukwu payouts site na obere nzo. The nzọ size ke egwuregwu adabara penny ohere mpere egwuregwu. Ọ bụ ihe na mara mma cha cha ohere mpere game nhọrọ na ike ga-egwuri on your mobile handset, na ọ laa site mFortune Mobile Casino.